ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခံဥပဒထေဲက မွနျမာစာ – Federal Journal
ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခံဥပဒထေဲက မွနျမာစာ
မွနျမာနိုငျငံ၏ ရုံးသုံးစာသညျ မွနျမာစာဖွဈကွောငျး ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒထေဲ၌လညျး ဖျောပွထားသညျ။ ယငျးဥပဒေ၏ အခနျး(၁၅)ဖွဈသော ‘အထှထှေပွေဋ်ဌါနျးခကျြမြား’ ဆိုသညျ့ အခနျး၌ ‘ပုဒျမ ၄၅၀’ အဖွဈ ဤသို့ ဖျောပွထားသညျကို တှနေို့ငျသညျ။
‘၄၅၀။ မွနျမာစာသညျ ရုံးသုံးစာဖွဈသညျ။
အဆိုပါ အခနျး(၁၅)၌ပငျ မွနျမာစာနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ‘ပုဒျမ ၄၅၂’ အဖွဈ ဤသို့ဖျောပွထားသညျကို တှနေို့ငျသညျ/
‘၄၅၂။ ဤဖှဲ၌စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ၏ နိဒါနျး၊ ပုဒျမမြား၊ ပုဒျမခှဲမြား၊ စကားလုံးစုမြား၊ စာကားလုံး တဈလုံးခငျြး၏ အနကျအဓိပ်ပာယျ၊ သဘောအယူအဆမြား ဖှငျ့ဆိုရာ၌ မွနျမာစာဖွငျ့ ရေးသားခကျြမြားပျေါတှငျသာ အခွပွေုရမညျ။’
ဥပဒအေသုံးတှငျ အမှတျစဉျ ထိုးထားသော ဂဏနျးကို ‘ပုဒျမ’ ဟုချေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အထကျပါ အမှတျစဉျ (၄၅၀)နှငျ့ (၄၅၂)တို့သညျ ဥပဒအေချေါအရ ‘ပုဒျမ ၄၅၀’ နှငျ့ ‘ပုဒျမ ၄၅၂’ တို့ပငျဖွဈသညျ။ ပုံမှနျ မွနျမာစာအသုံးတှငျ အမှတျစဉျ တဈခုစီအဖွဈ ဖျောပွခွငျးဖွဈ၍ ကိနျးဂဏနျးကို ဝိုကျကှငျးသုံးရသျောလညျး ဥပဒအေသုံးတှငျမူ ဥပဒပေုဒျမ အဖွဈ ဖျောပွခွငျးဖွဈသောကွောငျ့ ဝိုကျကှငျးမသုံးရပေ။
သကျဆိုငျရာ ဥပဒအေမြိုးမြိုးကို အစိုးရဝနျကွီးဌာန အသီးသီးကလညျး ရေးသားထုတျပွနျနကွေရာ၌ သတိမမူကွ၍ မွနျမာစာရေးထုံး စညျးမဉျြးနှငျ့ ဆနျးစဈကွညျ့လြှငျ လှဲခြျောသုံးနှုနျးကွသညျကို တှနေ့ရေတတျ ခွငျးကွောငျ့ သတိပွုသငျ့ရာရာ တခြို့ကို တငျပွပါမညျ။
နာမညျကြျော ပုဒျမ ၅၉ (စ)
ဥပဒအေသီးသီးပါ မွနျမာစာအသုံးအနှုနျးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပေါ နျာမညျကြျော ပုဒျမ တဈခုဖွဈသညျ့ ပုဒျမ ၅၉ ကို လကျတှလေ့လေ့ာကွညျ့ပါမညျ။ ပုဒျမ ၅၉ တှငျ ပုဒျမခှဲ ၇ ခု ပါသညျကို ဤသို့ တှနေို့ငျသညျ။
‘၅၉။ နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့ ဒုတိယသမ်မတမြား၏ အရညျအခငျြးမြားမှာ အောကျပါအတိုငျးဖွဈသညျ –
(က) နိုငျငံတျောနှငျ့ နိုငျငံသားမြားအပျေါ သစ်စာရှိသူ ဖွဈရမညျ။
(ခ) မိမိနှငျ့ မိဘ နှဈပါးလုံး နိုငျငံတျော၏ အာဏာပိုငျနကျအတှငျး၌ မှေးဖှားသော တိုငျးရငျးသာမှ ဖွဈသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားဖွဈရမညျ။
(ဂ) ရှေးခယျြတငျမွှောကျခွငျး ခံရသူသညျ အနညျးဆုံး အသကျ ၄၅ နှဈ ပွညျ့ပွီးသူဖွဈရမညျ။
(ဃ) နိုငျငံတျောအရေးအရာမြားဖွဈသော နိုငျငံရေး၊ အုပျခြုပျရေး၊ စီးပှားရေး၊ စဈရေး စသညျ့ အမွငျမြား ရရှိမညျ။
(င) သမ်မတအဖွဈ ရှေးခယျြတငျမွှောကျခံရသညျ့ အခြိနျနှငျ့ တဈဆကျတညျး အနျညျးဆုံး ၂၀ နိုငျငံတျောတှငျ အခွခေနြထေိုငျခဲ့သူ ဖွဈရမညျ၊
ခွှငျးခကျြ။ နိုငျငံတျော၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ နိုငျငံခွားသို့ တရားဝငျ သှားရောကျသညျ့ ကာလ မြားကိုလညျး နိုငျငံတျောတှငျ အခွခေနြထေိုငျခဲ့သညျ့ ကာလအဖွဈ ထညျ့သှငျးရေးတှကျရမညျ။
(စ) မိမိကိုယျတိုငျသျောလညျးကောငျး၊ မိမိ၏ ဇနီး သို့မဟုတျ ခငျပှနျးသျောလညျးကောငျး၊ မိမိ၏ တရားဝငျ သားသမီးတဈဦးဦးသျောလညျးကောငျး၊ ထိုတရားဝငျ သားသမီး တဈဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတျ ခငျပှနျးသျောလညျးကောငျး နိုငျငံခွားအစိုးရ၏ ကြေးဇူးသစ်စာတျောကို ခံယူစောငျ့ ရှောကျ ရိုသသေူ သို့မဟုတျ နိုငျငံခွားအစိုးရ၏ လကျအောကျခံဖွဈသူ သို့မဟုတျ တိုငျးတဈပါး ၏ နိုငျငံသားဖွဈသူမြား မဖွဈစရေ၊ ထိုသူမြားသညျ နိုငျငံခွားအစိုးရ၏ လကျအောကျခံဖွဈသူ သျောလညျးကောငျး၊ တိုငျးတဈပါး၏ နိုငျငံသားသျောလညျးကောငျး ခံစားရသော အခှငျ့အရေး မြားနှငျ့ ကြေးဇူးခံစားခှငျ့မြားကို ခံစားနိုငျခှငျ့ ရှိသူမြား မဖွဈစရေ၊
(ဆ) လှတျတျော ရှေးကာကျပှဲ၌ ရှေးကောကျတငျမွှောကျခံပိုငျခှငျ့အတှကျ သတျမှတျထားသညျ့ အရညျအခငျြးမြားအပွငျ နိုငျငံတျော သမ်မတအတှကျ သီးခွား သတျမှတျထားသော အရညျအခငျြးမြားနှငျ့လညျး ပွညျ့စုံရမညျ။’
ဥပဒမြေား၌ အမှတျစဉျ ဖျောပွထားသော အမှတျစဉျမြားသညျ ဥပဒေ ပုဒျမပငျ ဖွဈသညျ။ ဤဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ၏ အမှတျစဉျ (၅၉)သညျ ‘ဥပဒပေုဒျမ ၅၉’ ပငျဖွဈသညျ။ အဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ အခနျး (၃) ‘နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့ ဒုတိယသမ်မတမြား’၌ ဖျောပွပါရှိခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုသို့ အမှတျစဉျ တဈခုဖွငျ့ ဖျောပွရာ၌ အဓိပ်ပာယျ ပိုမို ပွညျ့စုံစရေနျ အပိုဒျခှဲမြားဖွငျ့ ထပျမံ ဖျောပွထားသညျ။ ဤပုဒျမ ၅၉ တှငျ ဆိုလြှငျလညျး ‘(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)’ ဟူ၍ ဖျောပွထားသညျကို တှနေို့ငျသညျ။ ထိုပုဒျမ ခှဲ တဈခုစီကို ဖျောပွလိုလြှငျ ‘ပုဒျမ ၅၉ (က)၊ ‘ပုဒျမ ၅၉ (ခ)၊ ‘ပုဒျမ ၅၉ (ဂ)၊ ‘ပုဒျမ ၅၉ (ဃ)၊ ‘ပုဒျမ ၅၉ (င)၊ ‘ပုဒျမ ၅၉ (စ)၊ ပုဒျမ ၅၉ (ဆ)၊ ဟူ၍ သုံးနှုနျးရမညျ။ ထို့ကွောငျ့ နျာမညျကြျော ပုဒျမ ဖွဈသော ‘၅၉ (စ) သညျ အမှတျစဉျ(၅၉)၏ အပိုဒျခှဲ ‘(စ)’ ဖွဈကွောငျ့ ‘ပုဒျမ ၉၅ (စ)’ ဟု ချေါတှငျခွငျးဖွဈသညျကို မွငျသာနိုငျပသေညျ။ ‘အပိုဒျခှဲ(စ)’ ကို ဥပဒအေသုံးအရ ဆိုလြှငျ ‘ပုဒျမခှဲ (စ)’ သို့မဟုတျ ‘ပုဒျမ ၅၉ (စ)’ ဟု ချေါတှငျသညျ။
အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သော ပုဒျမ နှဈခုဖွဈသညျ့ ‘ပုဒျမ ၄၅၀’ နှငျ့ ‘ပုဒျမ ၄၅၂’ တို့တှငျ ပုဒျမခှဲမြားမပါ ကွောငျး တှနေို့ငျပါသညျ။ ဥပဒေ ပုဒျမကို ရေးသညျ့အခါ ‘ဝိုကျကှငျး ( )’ မသုံးရဘဲ ပုဒျမခှဲကို ဖျောပွမှသလြှငျ ဝိုကျကှငျးကို သုံးရခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အထကျပါ ပုဒျမ နှဈခုကဲ့သို့ ပုဒျမခှဲမပါသော ပုဒျမမြိုးကို ‘ပုဒျမ (၄၅၀)’၊ ‘ပုဒျမ (၄၅၂)’ ဟူ၍ ဝိုကျကှငျးဖွငျ့ အရေးရကွောငျး သတိမူတတျရမညျဖွဈသညျ။ ပုဒျမခှဲ ပါမှသာလြှငျ ‘ပုဒျမ ၅၉ (စ)၊ ပုဒျမ ၉၅ (ဆ)’ စသညျဖွငျ့ ရေးရသညျ။ ဥပဒမေဟုတျသော စာအရေးအသားတှငျမူ စာပိုဒျနံပါတျ ကို ရညျညှနျးသညျ့အခါ ဝိုကျကှငျးကို သုံးပွီး အမှတျစဉျ (၄၅၀)၊ အပိုဒျ နံပါတျ (၄၅၂)၊ စာပိုဒျ (၅၉) စသညျဖွငျ့ သုံးနှုနျးရသောကွောငျ့ ဥပဒအေသုံးနှငျ့ ပုံမှနျမွနျမာစာအသုံးတို့၏ ကှဲပွားမှုကို ဆငျခွငျတတျရနျ ဖွဈသညျ။
ဥပဒတေဈခုကို ရေးဆှဲသညျ့အခါ တိုငျးသူပွညျသားအားလုံးအတှကျ မြှတလြျောကနျသညျ့ ဥပဒဖွေဈရမညျ။ ဘကျလိုကျခွငျး သို့မဟုတျ အာဃာတထားခွငျးမြိုး မဖွဈစရေပေ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ခဈြခွငျး၊ မုနျးခွငျး စသညျ့ အစှနျးတဈပါးပါး မပါဘဲ တရားမြှတမှုကို အခွခေံရမညျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပေါ ‘ပုဒျမ ၅၉ (စ)’ ကို လလေ့ာ ကွညျ့မညျဆိုလြှငျ အစှနျးတဈပါး ပါနသညျကို ဆငျခွငျမွငျသာနိုငျပါလိမျ့မညျ။
သျောလညျးကောငျး … သျောလညျးကောငျး
ပုဒျမ ၅၉ (စ) တှငျ ‘သျောလညျးကောငျး’ အသုံးကို တှနေို့ငျသညျ။ ‘သျောလညျးကောငျး’ ကို အသုံးပွုလြှငျ အနညျးဆုံး နှဈခါအသုံးပွုရသညျ။ ‘သျောလညျးကောငျး’ကို နှဈခါဖျောပွလြှငျ ‘တဈခုမဟုတျ တဈခု (တဈခုခု)’ ဟု အဓိပ်ပာယျရသညျ။ နှဈခုလုံးဖွဈသညျဟု မဆိုလိုပေ။
ဇျောဇျော သျောလညျးကောငျး၊ ထှနျးထှနျး သျောလညျးကောငျး ညနလောလိမျ့မညျ။
နှဈယောကျထဲက တဈယောကျသာ လာလိမျ့မညျဟု ဆိုလိုသညျ။ နှဈယောကျစလုံး လာမညျကို ဆိုလိုသညျ မဟုတျပေ။
ဇျောဇျောသျောလညျးကောငျး၊ ထှနျးထှနျးသျောလညျးကောငျး၊ ဘိုဘိုသျောလညျးကောငျး ညနေ လာလိမျ့ မညျ။
သုံးယောကျထဲက တဈယောကျသာ လာလိမျ့မညျဟု ဆိုလိုသညျ။ သုံးယောကျစလုံး လာမညျကို ဆိုလိုသညျ မဟုတျပေ။
သျောလညျးကောငျးကို သုံးလြှငျ အနညျးဆုံးနှဈခါသုံးရပွီး နောကျဆုံး ‘သျောလညျးကောငျး’ နောကျ၌ ပုဒျကလေး(၊) ထညျ့ရနျမလိုပေ။ ရှတှေ့ငျဖျောပွသော ‘သျောလညျးကောငျး’တို့နောကျ၌မူ ‘ပုဒျကလေး’ ထညျ့ပေး ရမညျ။
‘လညျးကောငျး’ သုံးလြှငျလညျး ‘သျောလညျးကောငျး’ သဘောအတိုငျးပငျ ဖွဈသညျ။ သို့သျော အဓိပ်ပာယျခငျြးမူ ဆနျ့ကငျြဘကျ ဖွဈသှားသညျ။
ဇျောဇျောသညျလညျးကောငျး၊ ထှနျးထှနျးသညျလညျးကောငျး လိမ်မာသော ကြောငျးသာားမြား ဖွဈကွသညျ။
ဤသညျမှာ ‘လညျးကောငျ’ကို နှဈခါ သုံးသညျ့ ပုံစံဖွဈသညျ။ အဓိပ်ပာယျမှာ နှဈယောကျစလုံး လာမညျဟု အဓိပ်ပာယျရသညျ။ နှဈခါ နှငျ့အထကျ သုံးသော ‘လညျးကောငျး’ ပုံစံကိုလညျး လလေ့ာကွညျ့နိုငျသညျ။
ဇျောဇျောသညျလညျးကောငျး၊ ထှနျးထှနျးသညျလညျးကောငျး၊ ဘိုဘိုသညျလညျးကောငျး လိမ်မာသော ကြောငျးသားမြားဖွဈကွသညျ။
ဤသညျမှာ ‘လညျးကောငျး’ကို နှဈခါနှငျ့အထကျ သုံးသညျ့ပုံစံဖွဈသညျ။ အဓိပ်ပာယျမှာ သုံးယောကျစလုံး လိမ်မာသညျဟု အဓိပ်ပာယျရသညျ။ ဖျာပွပါ ဝါကတြှငျ ‘လညျးကောငျး’ သုံးခါ ထညျ့ရမညျကို နှဈခါသာ ထညျ့ပေးထားပါက အင်ျဂါမစုံသော ဝါကဖြွဈသှားပမေညျ။
ဇျောဇျောသညျလညျးကောငျး၊ ထှနျးထှနျးသညျလညျးကောငျး၊ ဘိုဘိုသညျ လိမ်မာသော ကြောငျးသားမြား ဖွဈကွသညျ။
‘လညျးကောငျး’ကို တခြို့က ‘၎င်းငျး’ နှငျ့ မှားသုံးတတျကွသညျ။ ‘၎င်းငျး’ သညျ လညျးကောငျး’၏ အတို ကောကျစာလုံးဖွဈသညျမှာ မှနျသျောလညျး ဝါစင်ျဂ သတျမှတျခကျြအရ ‘လညျးကောငျး’သညျ သမ်ဗန်ဓဖွဈ၍ ‘၎င်းငျး’မှာမူ နာမျစားနှငျ့ နာမဝိသသေနတို့ ဖွဈသောကွောငျ့ပငျ။ ဝါစင်ျဂသဘောနှငျ့ပ မွငျသာအောငျ နှိုငျးယဉျြကွညျ့မညျ။
သမ်ဗန်ဓဖွဈသော ‘လညျးကောငျး’၏ နမူနာအသုံးကို အထကျတှငျ ဖျောပွပွီးဖွဈ၍ နာမျစားနှငျ့ နာမဝိသသေနအသုံးတို့ ဖွဈသော ‘၎င်းငျး’ ကို လလေ့ာကွညျ့ပါမညျ။
ကြှနျုပျသညျ ၎င်းငျး ရုပျရှငျကားကို ရုပျရှငျကး ဖွဈသညျ။ (နာမဝိသသေန)
၎င်းငျး မှာ အလှနျ ကောငျးသော ရုပျရှငျကားဖွဈသညျ။ (နာမျစား)
နာမဝိသသေန ကို ဝါကထြဲထညျ့သုံးသညျ့အခါ ‘နာမဝိသသေန+ နာမျ/ နာမျစား’ ပုံစံတှဲသုံးရပွီး နာမျစားကို ဝါကထြဲ ထညျ့သုံးသညျ့အခါမူ သူ့ဘာသာသူ ရပျတညျ သုံးနှုနျးနိုငျသညျ။ ၎င်းငျး ဆိုသညျ့ နာမျစား/နာမဝိသသေနသညျ ‘လညျးကောငျး’ ကိုမူ သုံးမညျဆိုလြှငျ အနညျးဆုံးနှဈခါ သုံးရသညျကို သတိပွုရမညျ။
ပုံမှနျ မွနျမာစာအသုံးတှငျဖွဈစေ၊ ဥပဒအေသုံးတှငျဖွဈစေ ‘သို့မဟုတျ’ သညျ ‘တဈခုမဟုတျ တဈခု’၊ ‘တဈခုခု’ဟု အဓိပ်ပာယျရသညျ။ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ ‘၅၉ (စ)’ တှငျ ‘သို့မဟုတျ’ အသုံးမြားစှာ ထညျ့ထားသညျကို တှနေို့ငျသညျ။ မွငျသာစရေနျ နမူနာဝါကမြားဖွငျ့ လလေ့ာကွညျ့ပါမညျ။
ဝနျထမျးကတျ သုံးမဟုတျ မှတျပုံတငျ ယူလာပါ။
ဝနျထမျးကတျ သို့မဟုတျ မှတျပုံတငျ သို့မဟုတျ ယဉျမောငျးလိုငျစငျ ယူလာပါ။
ပထမ ဝါကတြှငျ ‘ဝနျထမျးကတျ၊ မှတျပုံတငျ’ ဆိုသညျ့ နှဈမြိုးထဲမှ တဈမြိုးမြိုး ယူလာရမညျဟု ဆိုလိုသညျ။ ဒုတိယ ဝါကတြှငျမူ ‘ဝနျထမျးကတျ၊ မှတျပုံတငျ၊ ယဉျမောငျးလိုငျစငျ’ ဆိုသညျ့ သုံးမြိုးထဲမှ တဈမြိုးမြိုး ယူလာရမညျဟု ဆိုလိုသညျ။ ထို့အတူ ၄ မြိုး၊ ၅ မြိုး စသညျတို့ထဲမှ တဈမြိုးမြိုးဟု ရညျညှနျးလိုလြှငျလညျး ‘သို့မဟုတျ’ ကို လိုအပျသလောကျသုံးနိုငျပသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ‘သို့မဟုတျ’ကို ဝါကတြဈကွောငျးတှငျ တဈကွိမျတညျးလညျး သုံးနိုငျပွီး လိုအပျသလောက အကွိမျကွိမျလညျး သုံးနိုငျကွောငျး မွငျသာနိုငျပသေညျ။
မှးယှငျးတတျကွသညျမှာ နှဈမြိုးနှငျ့အထကျကို သုံးနှုနျးရာ၌ ‘သို့မဟုတျ’ ကို အပွညျ့အဝ မသုံးကွခွငျး ဖွဈသညျ။ နမူနာ လ့လာကွညျ့ပါမညျ။
ဝနျထမျးကတျ၊ မှတျပုံတငျ သို့မဟုတျ ယဉျမောငျးလိုငျစငျ ယူလာပါ။
ဤသို့ ဖျောပွလြှငျ ‘သုံးမြိုးထဲမှ တဈမြိုးမြိုး’ဟု အဓိပ်ပာယျ မရတော့ဘဲ သုံးမြိုးထဲမှ ဝနျထမျးကတျ နှငျ့ မှတျပုံတငျ’ဖွဈစေ၊ ဝနျထမျးကတျ နှငျ့ ယဉျမောငျးလိုငျစငျ’ဖွဈစေ နှဈမြိုးစီ ယူလာပါ ဟူသော အဓိပ်ပာယျ ဖွဈသှားပသေညျ။
အောကျပါ နောာကျက မဉျြးတို
ဝါကတြဈကွောငျး ဆုံးသညျ့အခါ ‘ပုဒျမ(။)’ ထညျ့ရသညျကို သိကွပသေညျ။ သို့သျော အဆိုပါ ဝါကတြှငျ ‘အောကျ’နှငျ့ တှဲပွီး ‘အောကျပါ၊ အောကျဖျောပွပါ၊ အောကျပါအတိုငျး စသညျဖွငျ့ သုံးထားလြှငျ ဝါကြ အဆုံးသတျကို ‘ပုဒျမ(။)’ အစား ‘မဉျြးတို (-)’ သုံးရသညျ။ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ ၅၉ နှငျ့ ပုဒျမခှဲမြား ဖျေွာပပုံကို နမူနာ ပွညျကွညျ့လြှငျ ‘အောကျပါအတိုငျး ဖွဈသညျ – ‘ ဟူ၍ သုံးနှုနျးထားသညျကို တှနေို့ငျသညျ။
‘၅၉။ နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့ ဒုတိယသမ်မတမြား၏ အရညျအခငျြးမြားမှာ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈသညျ –
(ခ) . . . . . .၊
(ဂ) . . . . .၊
(ဃ) . . . . .၊
(င) . . . . .၊
(စ) . . . . .၊
(ဆ) . . . ။’
‘ပုဒျမ ၅၉ (စ)’ကို ‘ပုဒျမ ၅၉ – စ ဟု ‘မဉျြးတု(-)’ နှငျ့ သုံးလိုကျမညျဆိုပါက ပုဒျမ ၅၉ ၏ ပုဒျမခှဲ (စ)’ ကို ရညျညှနျးသညျ့ အဓိပ်ပာယျ မဟုတျတော့ဘဲ သီးခွား ပုဒျမတဈခု ဖွဈကွောငျး ရညျညှနျးရာကသြှားမညျ ဖွဈသညျ။ ပွဋ်ဌာနျးပွီးသော ဥပဒေ ပုဒျမမြားကွားတှငျ နောကျထပျ ပုဒျမ တဈခုခု ကွားထိုး ဖွညျ့စှကျလိုသောအခါ မူလ ပုဒျမ နောကျတှငျ ‘မဉျြးတို (-)’ ထညျ့ရေးခွငျးဖွငျ့ နောကျထပျ ပုဒျမ တဈခု ဖွဈကွောငျး သုံးနှုနျးတတျပုံ ဥပဒအေသုံးဖွဈသညျကို သတိပွုရနျ ဖွဈသညျ။
ကိနျးဂဏနျးမြားကို ရေးသညျ့အခါ ဥပဒအေသုံးပငျ ဖွဈစေ၊ ရိုးရိုးအသုံးပငျ ဖွဈစေ ‘ဝိုကျကှငျး( )’ သုံးရမညျ့နရောနှငျ့ မသုံးရမညျ့နရော ဟူ၍ ခှဲခွားသတျမှတျထားသညျ။ အရှိအရအေတှကျကို ဖျောပွလြှငျ မသုံးဘဲ တဈခုတညျးကို ရညျညှနျးလြှငျ ဝိုကျကှငျးကို သုံးရကွောငျး သတိပွုရသငျ့သညျ။
ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ ၅၉ ကို ပွနျလလေ့ကွညျ့မညျဆိုလြှငျ ‘အသကျ ၄၅ နှဈ ပွညျ့ပွီးသူ’၊ ‘အနှဈ ၂၀ နုငျငံတျောတှငျ’ ဆိုသညျ့ အသုံမြား၌ ဝိုကျကှငျးမသုံးကွောငျး တှနေို့ငျသညျ။ အသကျ အရအေတှကျ ၄၅ ခု(နှဈ)၊ နှဈအရအေတှကျ အခု (အနှဈ)၂၀ စသညျဖွငျ့ အရအေတှကျကို ဖျောပွသောကွောငျ့ပငျ ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ‘အသကျ (၄၅)နှဈ ပွညျ့ပွီးသူ’၊ ‘အနှဈ(၂၀) နိုငျငံတျောတှငျ’ စသညျဖွငျ့ ကိနျးဂဏနျးကို ဝိုကျကှငျး သုံးလြှငျ ရေးထုံးစညျးမဉျြးအရ မှားယှငျးပမေညျ။
တဈခုတညျးကို ရညျညှနျးပွီး သုံးလြှငျ ဝိုကျကှငျးသုံးပုံ နမူနာတဈခု ဖျောပွရလြှငျ ‘အခနျး(၃)’ ဖွဈသညျ။ ဤသို့ည ဝိုကျကှငျးဖွငျ့ ဖျောပွခွငျး၏ အဓိပ်ပာယျမှာ အရအေတှကျ ၃ ခုဟု ရညျညှနျးခွငျး မဟုတျဘဲ ‘အခနျး(၃)’ ဟု အမညျပေးထားသညျ့ အဆိုပါ အခနျးစဉျ တဈခုတညျးကို ဆိုလိုပသေညျ။ ဝိုကျကှငျး သုံးပုံ နာကျထပျ နမူနာ တဈခု ဖျောပွပါမညျ။
ဘာသာရပျ အားလုံးတှငျ အဆငျ့(၄) ရသူမြားသာ လြှောကျထားနိုငျသညျ။
သူသညျ အမှတျ (၃) အခွခေံပညာ အထကျတနျးကြောငျးတှငျ တကျနသေညျ။
ဤအကွောငျးကို စာပိုဒျ အမှတျ(၅)တှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ယခု ဖျောပွပါနမူနာမြား၌ လေးခု၊ သုံးခု၊ ငါးခု စသညျဖွငျ့ အရအေတှကျကို ဖျောပွခွငျး မဟုတျဘဲ ‘အဆငျ့(၄)’ ဆိုသညျ့ တဈဆငျ့တညျး၊ ‘အမှတျ(၃)’ ဆိုသညျ့ တဈကြောငျးတညျး၊ ‘စာပိုဒျ အမှတျ (၅)’ ဆိုသညျ့ စာတဈပိုဒျ တညျးတို့ကို ရညျညှနျးခွငျးဖွဈသောကွောငျ့ ဝိုကျကှငျးဖွငျ့ ဖျောပွခွငျး ဖွဈသညျ။
ဤသညျတို့မှာ ဥပဒအေသုံးနှငျ့ ဆကျစပျရာရာ မွနျမာစာ ရေးထုံး စညျးမဉျြး သတျမှတျခကျြတခြို့ကို ထငျသာမွငျသာစရေနျ အကဉျြးမြှ ဆှေးနှေးတငျပွခွငျး ဖွဈသညျ။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြခံဥပဒေထဲက မြန်မာစာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးစာသည် မြန်မာစာဖြစ်ကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေထဲ၌လည်း ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းဥပဒေ၏ အခန်း(၁၅)ဖြစ်သော ‘အထွေထွေပြဋ္ဌဌါန်းချက်များ’ ဆိုသည့် အခန်း၌ ‘ပုဒ်မ ၄၅၀’ အဖြစ် ဤသို့ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
‘၄၅၀။ မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အခန်း(၁၅)၌ပင် မြန်မာစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‘ပုဒ်မ ၄၅၂’ အဖြစ် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်/
‘၄၅၂။ ဤဖွဲ၌စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ နိဒါန်း၊ ပုဒ်မများ၊ ပုဒ်မခွဲများ၊ စကားလုံးစုများ၊ စာကားလုံး တစ်လုံးချင်း၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်၊ သဘောအယူအဆများ ဖွင့်ဆိုရာ၌ မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားချက်များပေါ်တွင်သာ အခြေပြုရမည်။’
ဥပဒေအသုံးတွင် အမှတ်စဉ် ထိုးထားသော ဂဏန်းကို ‘ပုဒ်မ’ ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ အမှတ်စဉ် (၄၅၀)နှင့် (၄၅၂)တို့သည် ဥပဒေအခေါ်အရ ‘ပုဒ်မ ၄၅၀’ နှင့် ‘ပုဒ်မ ၄၅၂’ တို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် မြန်မာစာအသုံးတွင် အမှတ်စဉ် တစ်ခုစီအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်၍ ကိန်းဂဏန်းကို ဝိုက်ကွင်းသုံးရသော်လည်း ဥပဒေအသုံးတွင်မူ ဥပဒေပုဒ်မ အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဝိုက်ကွင်းမသုံးရပေ။
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအမျိုးမျိုးကို အစိုးရဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးကလည်း ရေးသားထုတ်ပြန်နေကြရာ၌ သတိမမူကြ၍ မြန်မာစာရေးထုံး စည်းမျဉ်းနှင့် ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် လွဲချော်သုံးနှုန်းကြသည်ကို တွေ့နေရတတ် ခြင်းကြောင့် သတိပြုသင့်ရာရာ တချို့ကို တင်ပြပါမည်။
နာမည်ကျော် ပုဒ်မ ၅၉ (စ)
ဥပဒေအသီးသီးပါ မြန်မာစာအသုံးအနှုန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ န်ာမည်ကျော် ပုဒ်မ တစ်ခုဖြစ်သည့် ပုဒ်မ ၅၉ ကို လက်တွေ့လေ့လာကြည့်ပါမည်။ ပုဒ်မ ၅၉ တွင် ပုဒ်မခွဲ ၇ ခု ပါသည်ကို ဤသို့ တွေ့နိုင်သည်။
‘၅၉။ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –
(က) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
(ခ) မိမိနှင့် မိဘ နှစ်ပါးလုံး နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်နက်အတွင်း၌ မွေးဖွားသော တိုင်းရင်းသာမှ ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(ဂ) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသူသည် အနည်းဆုံး အသက် ၄၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) နိုင်ငံတော်အရေးအရာများဖြစ်သော နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး စသည့် အမြင်များ ရရှိမည်။
(င) သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့် အချိန်နှင့် တစ်ဆက်တည်း အန်ည်းဆုံး ၂၀ နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်၊
ခြွင်းချက်။ နိုင်ငံတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တရားဝင် သွားရောက်သည့် ကာလ များကိုလည်း နိုင်ငံတော်တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် ကာလအဖြစ် ထည့်သွင်းရေးတွက်ရမည်။
(စ) မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ တရားဝင် သားသမီးတစ်ဦးဦးသော်လည်းကောင်း၊ ထိုတရားဝင် သားသမီး တစ်ဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော်လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို ခံယူစောင့် ရှောက် ရိုသေသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သူများ မဖြစ်စေရ၊ ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားသော်လည်းကောင်း ခံစားရသော အခွင့်အရေး များနှင့် ကျေးဇူးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့် ရှိသူများ မဖြစ်စေရ၊
(ဆ) လွှတ်တော် ရွေးကာက်ပွဲ၌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများအပြင် နိုင်ငံတော် သမ္မတအတွက် သီးခြား သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းများနှင့်လည်း ပြည့်စုံရမည်။’
ဥပဒေများ၌ အမှတ်စဉ် ဖော်ပြထားသော အမှတ်စဉ်များသည် ဥပဒေ ပုဒ်မပင် ဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အမှတ်စဉ် (၅၉)သည် ‘ဥပဒေပုဒ်မ ၅၉’ ပင်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၃) ‘နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ’၌ ဖော်ပြပါရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အမှတ်စဉ် တစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြရာ၌ အဓိပ္ပာယ် ပိုမို ပြည့်စုံစေရန် အပိုဒ်ခွဲများဖြင့် ထပ်မံ ဖော်ပြထားသည်။ ဤပုဒ်မ ၅၉ တွင် ဆိုလျှင်လည်း ‘(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊ (စ)၊ (ဆ)’ ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ထိုပုဒ်မ ခွဲ တစ်ခုစီကို ဖော်ပြလိုလျှင် ‘ပုဒ်မ ၅၉ (က)၊ ‘ပုဒ်မ ၅၉ (ခ)၊ ‘ပုဒ်မ ၅၉ (ဂ)၊ ‘ပုဒ်မ ၅၉ (ဃ)၊ ‘ပုဒ်မ ၅၉ (င)၊ ‘ပုဒ်မ ၅၉ (စ)၊ ပုဒ်မ ၅၉ (ဆ)၊ ဟူ၍ သုံးနှုန်းရမည်။ ထို့ကြောင့် န်ာမည်ကျော် ပုဒ်မ ဖြစ်သော ‘၅၉ (စ) သည် အမှတ်စဉ်(၅၉)၏ အပိုဒ်ခွဲ ‘(စ)’ ဖြစ်ကြောင့် ‘ပုဒ်မ ၉၅ (စ)’ ဟု ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို မြင်သာနိုင်ပေသည်။ ‘အပိုဒ်ခွဲ(စ)’ ကို ဥပဒေအသုံးအရ ဆိုလျှင် ‘ပုဒ်မခွဲ (စ)’ သို့မဟုတ် ‘ပုဒ်မ ၅၉ (စ)’ ဟု ခေါ်တွင်သည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ပုဒ်မ နှစ်ခုဖြစ်သည့် ‘ပုဒ်မ ၄၅၀’ နှင့် ‘ပုဒ်မ ၄၅၂’ တို့တွင် ပုဒ်မခွဲများမပါ ကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပဒေ ပုဒ်မကို ရေးသည့်အခါ ‘ဝိုက်ကွင်း ( )’ မသုံးရဘဲ ပုဒ်မခွဲကို ဖော်ပြမှသလျှင် ဝိုက်ကွင်းကို သုံးရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ပုဒ်မ နှစ်ခုကဲ့သို့ ပုဒ်မခွဲမပါသော ပုဒ်မမျိုးကို ‘ပုဒ်မ (၄၅၀)’၊ ‘ပုဒ်မ (၄၅၂)’ ဟူ၍ ဝိုက်ကွင်းဖြင့် အရေးရကြောင်း သတိမူတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မခွဲ ပါမှသာလျှင် ‘ပုဒ်မ ၅၉ (စ)၊ ပုဒ်မ ၉၅ (ဆ)’ စသည်ဖြင့် ရေးရသည်။ ဥပဒေမဟုတ်သော စာအရေးအသားတွင်မူ စာပိုဒ်နံပါတ် ကို ရည်ညွှန်းသည့်အခါ ဝိုက်ကွင်းကို သုံးပြီး အမှတ်စဉ် (၄၅၀)၊ အပိုဒ် နံပါတ် (၄၅၂)၊ စာပိုဒ် (၅၉) စသည်ဖြင့် သုံးနှုန်းရသောကြောင့် ဥပဒေအသုံးနှင့် ပုံမှန်မြန်မာစာအသုံးတို့၏ ကွဲပြားမှုကို ဆင်ခြင်တတ်ရန် ဖြစ်သည်။
ဥပဒေတစ်ခုကို ရေးဆွဲသည့်အခါ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအတွက် မျှတလျော်ကန်သည့် ဥပဒေဖြစ်ရမည်။ ဘက်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အာဃာတထားခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း စသည့် အစွန်းတစ်ပါးပါး မပါဘဲ တရားမျှတမှုကို အခြေခံရမည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ‘ပုဒ်မ ၅၉ (စ)’ ကို လေ့လာ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အစွန်းတစ်ပါး ပါနသည်ကို ဆင်ခြင်မြင်သာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သော်လည်းကောင်း … သော်လည်းကောင်း
ပုဒ်မ ၅၉ (စ) တွင် ‘သော်လည်းကောင်း’ အသုံးကို တွေ့နိုင်သည်။ ‘သော်လည်းကောင်း’ ကို အသုံးပြုလျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ခါအသုံးပြုရသည်။ ‘သော်လည်းကောင်း’ကို နှစ်ခါဖော်ပြလျှင် ‘တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု (တစ်ခုခု)’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပေ။
– ဇော်ဇော် သော်လည်းကောင်း၊ ထွန်းထွန်း သော်လည်းကောင်း ညနေလာလိမ့်မည်။
နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်သာ လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး လာမည်ကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်ပေ။
– ဇော်ဇော်သော်လည်းကောင်း၊ ထွန်းထွန်းသော်လည်းကောင်း၊ ဘိုဘိုသော်လည်းကောင်း ညနေ လာလိမ့် မည်။
သုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက်သာ လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သုံးယောက်စလုံး လာမည်ကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်ပေ။
သော်လည်းကောင်းကို သုံးလျှင် အနည်းဆုံးနှစ်ခါသုံးရပြီး နောက်ဆုံး ‘သော်လည်းကောင်း’ နောက်၌ ပုဒ်ကလေး(၊) ထည့်ရန်မလိုပေ။ ရှေ့တွင်ဖော်ပြသော ‘သော်လည်းကောင်း’တို့နောက်၌မူ ‘ပုဒ်ကလေး’ ထည့်ပေး ရမည်။
‘လည်းကောင်း’ သုံးလျှင်လည်း ‘သော်လည်းကောင်း’ သဘောအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဓိပ္ပာယ်ချင်းမူ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သွားသည်။
– ဇော်ဇော်သည်လည်းကောင်း၊ ထွန်းထွန်းသည်လည်းကောင်း လိမ္မာသော ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်မှာ ‘လည်းကောင်’ကို နှစ်ခါ သုံးသည့် ပုံစံဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ နှစ်ယောက်စလုံး လာမည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ နှစ်ခါ နှင့်အထက် သုံးသော ‘လည်းကောင်း’ ပုံစံကိုလည်း လေ့လာကြည့်နိုင်သည်။
– ဇော်ဇော်သည်လည်းကောင်း၊ ထွန်းထွန်းသည်လည်းကောင်း၊ ဘိုဘိုသည်လည်းကောင်း လိမ္မာသော ကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်မှာ ‘လည်းကောင်း’ကို နှစ်ခါနှင့်အထက် သုံးသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ သုံးယောက်စလုံး လိမ္မာသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဖ်ာပြပါ ဝါကျတွင် ‘လည်းကောင်း’ သုံးခါ ထည့်ရမည်ကို နှစ်ခါသာ ထည့်ပေးထားပါက အင်္ဂ࿿ါမစုံသော ဝါကျဖြစ်သွားပေမည်။
– ဇော်ဇော်သည်လည်းကောင်း၊ ထွန်းထွန်းသည်လည်းကောင်း၊ ဘိုဘိုသည် လိမ္မာသော ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြသည်။
‘လည်းကောင်း’ကို တချို့က ‘ゞင်း’ နှင့် မှားသုံးတတ်ကြသည်။ ‘ゞင်း’ သည် လည်းကောင်း’၏ အတို ကောက်စာလုံးဖြစ်သည်မှာ မှန်သော်လည်း ဝါစင်္ဂ࿿ သတ်မှတ်ချက်အရ ‘လည်းကောင်း’သည် သမ္ဗန္ဓဖြစ်၍ ‘ゞင်း’မှာမူ နာမ်စားနှင့် နာမဝိသေသနတို့ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ ဝါစင်္ဂ࿿သဘောနှင့်ပ မြင်သာအောင် နှိုင်းယျဉ်ကြည့်မည်။
သမ္ဗန္ဓဖြစ်သော ‘လည်းကောင်း’၏ နမူနာအသုံးကို အထက်တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်၍ နာမ်စားနှင့် နာမဝိသေသနအသုံးတို့ ဖြစ်သော ‘ゞင်း’ ကို လေ့လာကြည့်ပါမည်။
– ကျွန်ုပ်သည် ゞင်း ရုပ်ရှင်ကားကို ရုပ်ရှင်ကး ဖြစ်သည်။ (နာမဝိသေသန)
– ゞင်း မှာ အလွန် ကောင်းသော ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ (နာမ်စား)
နာမဝိသေသန ကို ဝါကျထဲထည့်သုံးသည့်အခါ ‘နာမဝိသေသန+ နာမ်/ နာမ်စား’ ပုံစံတွဲသုံးရပြီး နာမ်စားကို ဝါကျထဲ ထည့်သုံးသည့်အခါမူ သူ့ဘာသာသူ ရပ်တည် သုံးနှုန်းနိုင်သည်။ ゞင်း ဆိုသည့် နာမ်စား/နာမဝိသေသနသည် ‘လည်းကောင်း’ ကိုမူ သုံးမည်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံးနှစ်ခါ သုံးရသည်ကို သတိပြုရမည်။
ပုံမှန် မြန်မာစာအသုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေအသုံးတွင်ဖြစ်စေ ‘သို့မဟုတ်’ သည် ‘တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု’၊ ‘တစ်ခုခု’ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ‘၅၉ (စ)’ တွင် ‘သို့မဟုတ်’ အသုံးများစွာ ထည့်ထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ မြင်သာစေရန် နမူနာဝါကျများဖြင့် လေ့လာကြည့်ပါမည်။
– ဝန်ထမ်းကတ် သုံးမဟုတ် မှတ်ပုံတင် ယူလာပါ။
– ဝန်ထမ်းကတ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ယဉ်မောင်းလိုင်စင် ယူလာပါ။
ပထမ ဝါကျတွင် ‘ဝန်ထမ်းကတ်၊ မှတ်ပုံတင်’ ဆိုသည့် နှစ်မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးမျိုး ယူလာရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဒုတိယ ဝါကျတွင်မူ ‘ဝန်ထမ်းကတ်၊ မှတ်ပုံတင်၊ ယဉ်မောင်းလိုင်စင်’ ဆိုသည့် သုံးမျိုးထဲမှ တစ်မျိုးမျိုး ယူလာရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့အတူ ၄ မျိုး၊ ၅ မျိုး စသည်တို့ထဲမှ တစ်မျိုးမျိုးဟု ရည်ညွှန်းလိုလျှင်လည်း ‘သို့မဟုတ်’ ကို လိုအပ်သလောက်သုံးနိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ‘သို့မဟုတ်’ကို ဝါကျတစ်ကြောင်းတွင် တစ်ကြိမ်တည်းလည်း သုံးနိုင်ပြီး လိုအပ်သလောက အကြိမ်ကြိမ်လည်း သုံးနိုင်ကြောင်း မြင်သာနိုင်ပေသည်။
မှးယွင်းတတ်ကြသည်မှာ နှစ်မျိုးနှင့်အထက်ကို သုံးနှုန်းရာ၌ ‘သို့မဟုတ်’ ကို အပြည့်အဝ မသုံးကြခြင်း ဖြစ်သည်။ နမူနာ လ့လာကြည့်ပါမည်။
– ဝန်ထမ်းကတ်၊ မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ယဉ်မောင်းလိုင်စင် ယူလာပါ။
ဤသို့ ဖော်ပြလျှင် ‘သုံးမျိုးထဲမှ တစ်မျိုးမျိုး’ဟု အဓိပ္ပာယ် မရတော့ဘဲ သုံးမျိုးထဲမှ ဝန်ထမ်းကတ် နှင့် မှတ်ပုံတင်’ဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းကတ် နှင့် ယဉ်မောင်းလိုင်စင်’ဖြစ်စေ နှစ်မျိုးစီ ယူလာပါ ဟူသော အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သွားပေသည်။
အောက်ပါ နောက်က မျဉ်းတို
ဝါကျတစ်ကြောင်း ဆုံးသည့်အခါ ‘ပုဒ်မ(။)’ ထည့်ရသည်ကို သိကြပေသည်။ သို့သော် အဆိုပါ ဝါကျတွင် ‘အောက်’နှင့် တွဲပြီး ‘အောက်ပါ၊ အောက်ဖော်ပြပါ၊ အောက်ပါအတိုင်း စသည်ဖြင့် သုံးထားလျှင် ဝါကျ အဆုံးသတ်ကို ‘ပုဒ်မ(။)’ အစား ‘မျဉ်းတို (-)’ သုံးရသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉ နှင့် ပုဒ်မခွဲများ ဖော်ပြပုံကို နမူနာ ပြည်ကြည့်လျှင် ‘အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် – ‘ ဟူ၍ သုံးနှုန်းထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
‘၅၉။ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၏ အရည်အချင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် –
(က) နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာရှိသူ ဖြစ်ရမည်၊
‘ပုဒ်မ ၅၉ (စ)’ကို ‘ပုဒ်မ ၅၉ – စ ဟု ‘မျဉ်းတု(-)’ နှင့် သုံးလိုက်မည်ဆိုပါက ပုဒ်မ ၅၉ ၏ ပုဒ်မခွဲ (စ)’ ကို ရည်ညွှန်းသည့် အဓိပ္ပာယ် မဟုတ်တော့ဘဲ သီးခြား ပုဒ်မတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ရည်ညွှန်းရာကျသွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြဋ္ဌဌာန်းပြီးသော ဥပဒေ ပုဒ်မများကြားတွင် နောက်ထပ် ပုဒ်မ တစ်ခုခု ကြားထိုး ဖြည့်စွက်လိုသောအခါ မူလ ပုဒ်မ နောက်တွင် ‘မျဉ်းတို (-)’ ထည့်ရေးခြင်းဖြင့် နောက်ထပ် ပုဒ်မ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သုံးနှုန်းတတ်ပုံ ဥပဒေအသုံးဖြစ်သည်ကို သတိပြုရန် ဖြစ်သည်။
ကိန်းဂဏန်းများကို ရေးသည့်အခါ ဥပဒေအသုံးပင် ဖြစ်စေ၊ ရိုးရိုးအသုံးပင် ဖြစ်စေ ‘ဝိုက်ကွင်း( )’ သုံးရမည့်နေရာနှင့် မသုံးရမည့်နေရာ ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ အရှိအရေအတွက်ကို ဖော်ပြလျှင် မသုံးဘဲ တစ်ခုတည်းကို ရည်ညွှန်းလျှင် ဝိုက်ကွင်းကို သုံးရကြောင်း သတိပြုရသင့်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၉ ကို ပြန်လေ့လကြည့်မည်ဆိုလျှင် ‘အသက် ၄၅ နှစ် ပြည့်ပြီးသူ’၊ ‘အနှစ် ၂၀ နုင်ငံတော်တွင်’ ဆိုသည့် အသုံများ၌ ဝိုက်ကွင်းမသုံးကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ အသက် အရေအတွက် ၄၅ ခု(နှစ်)၊ နှစ်အရေအတွက် အခု (အနှစ်)၂၀ စသည်ဖြင့် အရေအတွက်ကို ဖော်ပြသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ‘အသက် (၄၅)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ’၊ ‘အနှစ်(၂၀) နိုင်ငံတော်တွင်’ စသည်ဖြင့် ကိန်းဂဏန်းကို ဝိုက်ကွင်း သုံးလျှင် ရေးထုံးစည်းမျဉ်းအရ မှားယွင်းပေမည်။
တစ်ခုတည်းကို ရည်ညွှန်းပြီး သုံးလျှင် ဝိုက်ကွင်းသုံးပုံ နမူနာတစ်ခု ဖော်ပြရလျှင် ‘အခန်း(၃)’ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ည ဝိုက်ကွင်းဖြင့် ဖော်ပြခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အရေအတွက် ၃ ခုဟု ရည်ညွှန်းခြင်း မဟုတ်ဘဲ ‘အခန်း(၃)’ ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ အခန်းစဉ် တစ်ခုတည်းကို ဆိုလိုပေသည်။ ဝိုက်ကွင်း သုံးပုံ နာက်ထပ် နမူနာ တစ်ခု ဖော်ပြပါမည်။
– ဘာသာရပ် အားလုံးတွင် အဆင့်(၄) ရသူများသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
– သူသည် အမှတ် (၃) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် တက်နေသည်။
– ဤအကြောင်းကို စာပိုဒ် အမှတ်(၅)တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခု ဖော်ပြပါနမူနာများ၌ လေးခု၊ သုံးခု၊ ငါးခု စသည်ဖြင့် အရေအတွက်ကို ဖော်ပြခြင်း မဟုတ်ဘဲ ‘အဆင့်(၄)’ ဆိုသည့် တစ်ဆင့်တည်း၊ ‘အမှတ်(၃)’ ဆိုသည့် တစ်ကျောင်းတည်း၊ ‘စာပိုဒ် အမှတ် (၅)’ ဆိုသည့် စာတစ်ပိုဒ် တည်းတို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဝိုက်ကွင်းဖြင့် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသည်တို့မှာ ဥပဒေအသုံးနှင့် ဆက်စပ်ရာရာ မြန်မာစာ ရေးထုံး စည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ချက်တချို့ကို ထင်သာမြင်သာစေရန် အကျဉ်းမျှ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။